Imandarmedia.com.np: नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै सानै उमेरमा पहिलो समलिंगी प्रधानमन्त्री बन्न लागेका यी को हुन् ?
Big News, International » नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै सानै उमेरमा पहिलो समलिंगी प्रधानमन्त्री बन्न लागेका यी को हुन् ?
नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै सानै उमेरमा पहिलो समलिंगी प्रधानमन्त्री बन्न लागेका यी को हुन् ?
लियो भाराड्कार आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । ३८ बर्षिय भाराड्कार रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डको सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो पार्टी फाइन गेलको नेता चुनिएसँग देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो ।
Trending : Big News, International